Video: Ahịa Dị Ka Beyonce (NSFW) | Martech Zone
Saturday, April 27, 2013 Sunday, Eprel 28, 2013 Douglas Karr
Naanị isi na vidiyo a nwere ụfọdụ asụsụ mara mma. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike mkpa itinye na ekweisi. Nke a bụ ezigbo ozi ọhụụ Gary Vaynerchuk. Enwere m mmasị na ozi ahụ na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ atụmatụ dị ogologo oge ma ọ bụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aghọtaghị.
Ana m agwa ndị folks oge niile na ọ dị ka akaụntụ ezumike nka. Don't naghị atụ anya ị nweta ego otu ọnwa gachara, ọ chọrọ ọnwa na ọtụtụ afọ itinye ego na iwulite ọkụ. Nke a blog bụ ezigbo ihe atụ. Echetara m n'ezie mgbe blọọgụ a na-akụ ihe karịrị ndị ọbịa 100 kwa ụbọchị. Ugbu a, afọ ole na ole ka e mesịrị, anyị nwere ụbọchị ndị ọbịa 7 ma ọ bụ 8 puku. Enweghị ihe nzuzo na uto… anyị na-na mgbe na-agbalị inye uru na onye ọ bụla post na anọgide na-ebipụta kwa ụbọchị (ọtụtụ oge).
M hụrụ n'anya ikpeazụ akara “Ọ dịghị ihe nzuzo na uto… anyị na mgbe a na-agbalị inye uru na onye ọ bụla post…” Inye uru na onye ọ bụla post ga-maa ụgbọala na okporo ụzọ na ga-n'ozuzu-eduga akwa ahịa atụmatụ!
Daalụ, Steve. E nwere oge mgbe anyị lekwasịrị anya karịa na isiokwu na oke. Mgbe ọzọ!
LMAO, Nke a dị egwu Doug !! Naanị kwalite: “Ugbu a, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, anyị nwere ụbọchị nke ndị ọbịa 7 ma ọ bụ 8 kwa afọ.” afọ = ụbọchị ebe a. [na-ejide ya maka gị nwa osisi!]